“सोना जानें कसे , पडोसी जाने बसे“ यसको नेपाली अनुवाद : सुन थाहा हुन्छ कसी लाएपछि छिमेकी थाहा हुन्छ सगैं बसेपछि । त्यस कारण इस्लामको सही जानकारी गहिरिएर अध्ययन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । यहां पढ्नुहोस् बहुबिवाह बारे समाजमा विद्ममान सोच, समाजमा फैलिएको भ्रम (अफवा) र इस्लामको यथार्तता फरक छ ।
आज समाजमा इस्लाम र बहुबिवाहलाई जोडेर जुन शब्दजालको खेल खेलिदैं छ त्यो स्वार्थीहरुले नितांत आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि गरेकाछन् । यस सम्बनधमा सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ । इस्लाममा हुक्म अर्थात आदेश भनिएका कार्यहरु गर्नै पर्ने हुन्छ अन्यथा पापको भागिदार हुन्छ ।
इस्लाममा बहुबिवाह अनिवार्य नभए नि आज हाम्रो समुदायमा यो बहुबिवाहको प्रचलन बढ्दै छ । क्षमता नहुदां पनि एउटा पत्नी हुदांहुदैं अर्को विवाह गर्नेहरु धेरै छन् । एउटै पत्नीबाट जन्मिएका सन्तानको जिम्मेवारी बहन गर्न नक्नेहरु उनीहरुलाई सुखी राख्न सक्ने क्षमता नहुदां पनि खास गरी झूट बोलेर वा ढाटेर दोस्रो विवाह गर्छन् । जसका कारण आज धेरै महिलाहरु घरेलुहिंसाका सिकार छन् ।
अर्को शब्दमा भन्दा बहुविवाह गर्ने क्षमता नहुँदा पनि बहुविवाह गर्ने प्रचलन बढेको छ । पत्नीको मन्जूरी बिना नै वा तलाक दिने धम्की र दबाब दिएर भए पनि मन्जूरी लिई अर्को विवाह गरी आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नेहरुको कमी छैन । धेरै जसोले यो सोच राख्नेहरुले एक भन्दा बढी विवाह गरेको पाईन्छ कि इस्लामले चार वटा विवाह गर्न सक्ने अधिकार नै दिएको छ । जब कि यो अनुमति मात्र हो र जुन अनुमति सबै परिस्थितिमा लागु हुदैंन। इस्लामले जहां एक भन्दा बढी विवाह गर्ने अनुमति मात्र दिएको छ त्यहीं सबै पत्नीहरुमा समान न्याय गर्ने ताकीद अर्थात बाध्यकारी आदेश पनि दिएको छ ।
इस्लामले बहु विवाह गर्ने अनुमति समाजका समस्या र विकृतिलाई रोक्ने उद्देश्यले दियो । जुन अनुमति त्यतिबेला खास गरी पालना गर्न भनियो । जब चौदह शय वर्ष अघि युद्धमा धेरै मानिसहरु शहीद भएथिए घरमा विधवा महिला र अनाथ बच्चाहरु मात्र थिए । ती विधवा महिला र अनाथ बच्चाहरुलाई संरक्षण सुरक्षा र तिनका जीविकोपार्जनमा सहजता होस् भनी एउटा कमाउने र ती असहायहरुलाई सहारा दिन उनीहरुलाई पाल्न सक्ने पुरुषका लागि अनुमति दिईयो । त्यो पनि सबैलाई कर गरी होईन, जसंसग एक भन्दा बढी पत्नी र बच्चाहरुलाई सिहार गर्ने क्षमता र हैशियत थियो तिनीहरुका लागि मात्र । साथै महिलालाई पनि कर गरिएको थिएन । जसलाई आफु विकृति तिर न लागि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने क्षमता थियो । उनीहरुलाई कुनै किसिमको दबाब दिईएको थिए । अर्थात यो अनुमति महिला र बच्चाहरुलाई संरक्षण दिलाउन त्यति खेर दिईयो न कि समस्या र विकृति उत्पन्न गर्न ।
आज समुदायमा हेर्ने हो भने रिक्सा चलाउनेले पनि बहु विवाह गरेको पाईन्छ भने तरकारीको ठेला लगाउनेले दुईटी पत्नी राखेकै छन् ।अर्काको घरमा कामदार भएकाहरुले पनि बहुबिवाह गरेको पाईन्छ ।
अब अशिक्षालाई कारण यस्तो गर्छन् भन्नौ भने शिक्षकले समेत बहु विवाह गरेकै पाईन्छ । अन्यथा न लाग्ने तर परिस्थिति साझा भए संयोग मात्र हुनेछ अथार्त भनाई के हो भने क्षमता न हुदां र इस्लामले भनेका कारण न भए पनि बहु विवाह गरेको पाईन्छ ।
अरु कुरामा यस्ता व्यक्तिहरु हवाला अर्थात प्रमाण खोज्ने र पालना समेत गर्ने गर्छन् । तर बहुविवाहको सन्दर्भमा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा आउदां बिर्सिन्छन् जब कि हदीश शरीफमा साफ लेखिएको छ कि यदि तिमी सक्षम छैनौं विवाह पश्चातका जिम्मेवारीहरु वहन गर्न भने एउटा निकाह विवाह पनि नगर र रोजा (व्रत) राखेर आफ्ना इच्छा लाई मार ।
तर यी कुरालाई समाज सामु साझा गर्न र दर्शाउन चाहदैंनन् । धार्मिक तथा सामाजिक अगुवा आखिर हदीशले भनेका कुरा स्वीकार गर्न तयार नहुने कस्तो सोच र मनस्थिति ?
आज हाम्रो समाजमा बहुविवाह हुने र गर्ने धेरै कारणहरु छन् जस मध्ये केही प्रमुख कारण यी हुन् । पत्नी मन न परेमा सन्तान न जन्मिएमा वा छोरी मात्र जन्मिएमा । आफुलाई दोस्रो विवाह गर्न मन लागेमा । प्रमुख कारण चांहि सम्पत्ति बढी भएमा ।
बहुबिवाहका कारण समाजमा धेरै घरेलुहिंसाका घटनाहरु बढिरहेका छन् । त्यस कारण बहु विवाह रोक्नुपर्छ र रोक्न सक्ने केही सरल उपाय यी हुन् । स्थानीय विवाह समिति गठन गर्ने । विवाह गर्न आउनेको पहिचानपत्र हेरी पुष्टि गर्ने आउने व्यत्ति स्थानीय वा बाहिरको भए सम्बन्धित ठाउमा विवाह भइसकेको वा नभएको भनी पत्ता लगाउने । मस्जिदमा नै विवाह गर्न आउने कारण सोध्ने ।
यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ कि इस्लाममा बहुविवाह एक अनुमति मात्र हो फर्ज अर्थात अनिवार्य वा पालना गर्नै पर्ने बाध्यकारी आदेश होईन ।
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले ईस्लाममा गर्ने कामहरुमा पनि स्तरीकरण गरिएको छ । फर्ज छोड्न नै नहुने छोडे भने पुण्य प्राप्ती त परको कुरा उल्टा गुनाहगार पापको भागीदारी हुने । जसमा नमाज पढ्नु रोजा बस्नु, शिक्षा हासिल गर्नु गराउनु आदि फर्ज अदा गर्नु अनिवार्य छ ।
सु्न्नत नछोड्दा नै बेस छोडे भने पुण्य पाइदैन् । बालिग छोराछोरीको समयमा विवाह गर्नु , बच्चाहरुलाई असल बनाउनु , छिमेकीका समस्यामा साथ दिनु , बिरामीको अयादत गर्नु भलाकुसारी गर्नु आदि ।
वाजिब छोड्न नहुने हैसियत हुदांहुदैं पनि नगरेमा भने पुण्यमा कमी हुने छ जस्तैः हज , जकात ,खैरात , कुर्बानी र वित्रनमाज आदि ।
इजाजत अर्थात अनुमति मात्र नगरे नि फरक नपर्ने कुरा जसमा एक भन्दा बढी निकाह अर्थात विवाह गर्ने अनुमति आउछं ।
अब क्रमशः कुरा जोड्दै जादां समुदायमा के भईरहेको छ हेर्नुस् ।
फर्जको कुराहरु गर्दा
नमाजको कुरा गरौं त कोही पढ्छन् कोही छाडेका हुन्छन् कोही कोही त शुक्रबार जुमा पढेर सब थोक फांडे भन्ने नि छन् । रोजाको कुरा गरौं त रमजान शरीफमा नि पान चपाएर मज्जाले हिन्छन् । त्यति बेला इस्लाम याद आउदैंन । बच्चाहरुलाई शिक्षा दिलाउने कुरा आए पैसा नै हुदैंन रे ।
बालिग हुनै नपाउदैं बाल विवाह गरी पठाउने प्रचलनमा कसैलाई इस्लाम याद आउदैंन कि हाम्रा नबीपाकको विवाह २५ वर्षको उमेर मुबारकमा भएको थियो ।
बच्चाहरु जन्माउंछन् तर उनीहरु असल बाटोमा छन् छैनन् कुनै वास्ता हुदैंन् । छिमेकी पीडाले बेहाल भएर छटपटिए मतलब हुदैंन, त्यति बेला पनि इस्लाम याद आउदैन । बिरामीलाई हेर्न जाने फुसर्त त कसैलाई हुदैंन आफ्नै यति धेरै काम हुन्छन् समय कहांबाट होस् । यति बेला नि इस्लाम याद आयो आएन ?
वाजिबका कुराहरु हैसियत भएकाहरु
हज जाने कुरामा छोराछोरीका लागि कमाउनु छ धेरै जिम्मेवारीहरु छन् पूरा गरी बुढेसकालमा जाउंला भन्नेहरुको कमी छैन । वाजिबको अर्थ थाहा हुदांहुदैं ढिलाइ गर्ने गर्छन् ।
जकातको कुरा आए जग्गा किन्नेहरुको कमी छैन किन कि जग्गाको जकात दिनु पर्दैन ।
खैरातको कुरा गरौं त भिक्षा माग्ने अलि हट्टाकट्टा देखे भने यत्रा जिउज्यान लिएकाछौं कमाएर खान सक्दैनौ भनी चार कुरा सुनाउनेको कमी कहां छ र । जबकि शरीयतमा भनिएको छ दाताको नाममा माग्नेहरुसंग प्रश्न नगर बरु हैसियत भए देऊ छैन् भने चुपचाप बस्ने कुनै कमेंट नगर्ने ।
कसैले दिनुपर्यो भने पनि पुरानो आफुलाई मन नपरेका वा बासी सामान दिने गर्छन् । जबकि इस्लामले भनेकोछ भिक्षा दिदां तिमीले मन नपरेका वा बासी खान नदिनु भनी हदीश नै छ । के यति बेला आयो त याद इस्लाम, आएन ।
कुर्बानीको कुरा गरौं भने यो नितांत पुण्यको नियतले गर भनी आदेश छ तर समिजमा यसमा पनि देखावटीपन र प्रतिस्पद्धाृ नै हुने गर्छ के यही हो त इस्लाम ?
वित्र नमाजको मात्र कुरा नै के जब फर्ज नमाज छाडेर अफसोच समेत गर्दैनन् यति बेला पनि आउदैन इस्लामको याद ।
हो इस्लाम पनि याद आउंछ शरीअत पनि अनि मुल्लाहरु पनि के कम गर्न गराउन साथ दिन थाहा छ त्यो शरीअत को कुन कुरा हो ।
अनुमति मात्र हो अर्थात एकभन्दा बढी निकाह गर्न इस्लामले दिएको अनुमति मात्र हो, नगरे पाप हुदैंन, हो त्यही कुरा हो बहुविवाह ।
जसको कुरा मात्र चले समाजमा हलचल भइहाल्छ । अरे यो त इस्लामले पुरुष भनाउदांहरुलाई दिएको इजाजत खुल्ला छूट हो यसमा कहां रोक लगाउन पाइन्छ ।
हेर्नुस् कस्तो भ्रममा छ समाज जुन कुरा फर्ज छ जसलाई छाडे गुनाहगार पापको भागीदार हुने त्यो बेला इस्लाम र शरीअत न सम्झिने । तर जसको अनुमति मात्र छ नगरे कुनै दण्ड सजाय छैन् त्यो अनुमति यस कारण कि समाजमा विकृति नफैलियोस् भनि अर्थात एउटा राम्रो उद्देश्यका लागि छ । त्यसमा समाजको सोच र आंखा खुल्ला छन् । अलि कति कुरा मात्र उठायो कि हलचल मच्चिहाल्छ । यस्तो लाग्छ संसार हल्लियो ।
बहुबिवाहको दुष्परिणामबाट समाजमा आज हजारौं महिला र उनीहरुसंग रहेका बच्चाहरुको धेरै दुर्गति छ । उनीहरुको विचल्ली छ न घर छ, न खाना बस्न ठेगान, कष्टपूर्ण जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । कसले सोच्ने ती असाहय महिला र बच्चाहरुको बारेमा कसले उठाउने तिनका पीडाका बोझ ?
कहां लेखेको छ इस्लामले कि एक महिला र उसका बच्चाहरुको भविष्यसंग खेलवाड गर भनेर ? कहां लेखकोे छ तिनलाई कष्टकर जीवन दान दिई आफु मोज गर ? अनी शायद कसैले यसको जवाफ दिन सक्दैन् ।
इस्लाम धर्मावलंबीहरु अन्तिम ईशदूतका फालोअर हुन् । सबैले बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अदुदाउद , तिर्मिजÞी जस्ता हदीश शरीफलाई अनुसरण गर्नछन् । यी हदीशमा भनिएका भनाइ कसैले नकार्न र अस्वीकार गर्न सक्दैन् । यही हदिशका उत्कृट किताब बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबुदाउद र तिर्मिजÞी आदिमा लेखिएको छ कि “ऐ नवजवानों तुम में जो कोई निकाह कि इस्तिताअत रखता है वो निकाह करे ये अजनबी औरत की तरफ निगाह करने से रोकने वाला है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है जिस में निकाह की इस्तिताअत नही वो रोजे रखे क्यों कि रोजा इस से दूर रखता है ।’’
नेपाली अनुवाद ः ”ऐ नवजवानहरु तिमी मध्ये जसंग क्षमता छ उसले विवाह गर किन भने यसले परनारीमाथि आंखा जानबाट बचाउंछ र आफ्ना गुप्तांगहरुको रक्षा गर्छ । जो संग क्षमता छैन उसले विवाह नगरी वर्त बस किनभने वर्तले विकृति बाट बचाउंछ ।
कुनै पनि इस्लाम धर्मावलंबीहरुले यी कुरालाई नकार्न नै सक्दैन किनभने यो हदीशमा लेखिएको छ कि ‘‘क्षमता नभए एक विवाह पनि नगर ।” अब कुरानपाकको कुरा गरौं भने स्पष्ट लेखिएको छ । तिमी बहुविवाह गर यो त बिल्कुल लेखिएको छैन कि गर्नै पर्छ अथवा अनिवार्य छ बहुबिवाह नगरे पाप लाग्छ भन्ने कुरा लेखिएको छैन । यदि बहुविवाह गर्नु पर्ने अवस्था आएमा पहिली पत्नीसंग अनुमति लिने । अनि विवाह पश्चात पत्नीहरु बीच एक कपाल बराबर पनि अन्याय न होस् । मलाई लाग्दैन, नेपाल त परै जाओस् संसार मै कोही महापुरुष यस्तो छैन अहिले जसले बहु पत्नीहरु बीच पूर्णरुपले न्याय गर्न सकोस् ।
अर्थात भनाइको अर्थ यो छ कि बहुविवाह गर्नु त परै एक विवाह गर्न पनि रोक लगाएको छ किनकि इस्लामले महिलालाई अव्वल दर्जा दिएको छ । नकि बहुविवाहका कारण दुविधा, समस्या तथा कष्टकरमा बाच्न बाध्य गराउन भनी ।
त्यस कारण बहुबिवाह इस्लाममा अनिवार्य होईन तसर्थ शरीअतको गलत व्याख्या र प्रयोजन न गर्न भनी सादर अनुरोध छ । पुरुषले बहुविवाह गर्न सक्ने भनी समुदायमा विकृति फैलिनबाट रोक्नका लागि दिइएको एक अनुमति मात्र हो आदेश होईन।